Authentic feat yaToko-Ekambi naLyon vanobvisa Juventus kubva kuTurin uye vachatamba iyo Final 8 yeChikwata cheChikwata cheChikwata - teles relay
Authentic feat yaToko-Ekambi naLyon vanobvisa Juventus kubva kuTurin uye vachatamba iyo Final 8 yeChikwata cheChikwata
By TELES RELAY On Nyamavhuvhu 8, 2020
Kumira zvekare mutambi weItaly, Juventus Turin, akabviswa muChikwata cheChikwataUEFA manheru eChishanu ichi naLyon anobva kuToko-Ekambi. Uye iyo Cameroonia yepasi rose yaive yakanaka kutanga pakukwira. Kana mugumbo rekutanga pamberi pechisimba nekuda kwedenda reCoronavirus Lyon rakanga rabuda rakakunda, zvakange zvakaoma kufunga kuti mukirabhu umo Cristiano Ronaldo anotamba, haugone kushandura njodzi. Uye zvaive chokwadi sezvo pasina timu yeFrance yakamboburitsa Juve muEuropean Cup. Hwechokwadi hwerudzi iripo.
L 'OL, zvine mwero 7e Ligue 1 munaKurume apo mumakwikwi akamiswa, akange apa kodzero yekurota gumbo rekutanga (1-0 budiriro). Zvirokwazvo yakarohwa (2-1), iyo Rhone kirabhu yakashandura iyo bvunzo kudzoka kunhandare yeTurin isina chinhu, dambudziko reCovid-19 rinoda. Saka hongu, hatizombofa takakwanisa kutsanangura kuti chikamu ichi chakavharwa chakashatisa kusvika sei, kumba, iko kuumbwa kwetralpine. Asi wake feat - nekuti ndizvo chaizvo -OL unofanira kuikoshesa nekuti chii.
Caqueret, inoshamisa pakati
Mutungamiri Aulas varume vakaita mutambo wakafanira. Inoshanda uye yakasimba munzira yekubuda, takavaona vakashinga uye voda munzira yekudzoka. Kufanana nemudziviriri wepakati Marcelo, kazhinji kushoropodzwa muRhône. Akachengetedza akati wandei mamiriro eChishanu manheru aya kuTurin. Kana iye Caqueret mudiki, makore makumi maviri, zvinoshamisika mukati memutambo.
Iyi 8e kudzoka kwekupedzisira, zviri pachena kuti kwakashamisa, nekuti kumashure kwemusuwo wakavharwa, kwakatemwa zvekare nemimwe miviri kwete sarudzo dzemakakatanwa, zvirango zviviri zvakapihwa. Imwe yakanyanya kudarika, yakapihwa kunaOL, imwe isipo zvachose muripo, iyo yakapihwa Juve uye yakashandurwa naCristiano Ronaldo, munyori weanopetwa. Pakupedzisira, idzi sarudzo dzinopfuura kusava nechokwadi dzakabatsiraOL, nebhonasi yakapihwa kuchinangwa chakatorwa kure nekumba kana paine chiitiko mumatare maviri. Memphis anodzoka, akakuvara zvakanyanya mumabvi muna Zvita apfuura, anga asingafanirwe kutamba nhabvu iyi gumi nematanhatu, akatora mukana uyu kuwana 6e chinangwa mumitambo 6 muC1 mwaka uno.
Rimwe rwiyo rwakanangana neManchester City ?
Chaizvoizvo vanopfeka mutambo uyu zvakare nekuti Lyon, isina kupenya chaizvo, vakawana kwavo muhombe muEuropean Cup kwemakore gumi, apoOL yakanga yaburitsa Real Madrid yatove muna 8e yekupedzisira muna 2010. Nevatambi vake vane tarenda, Memphis, dzimbasemu Aouar kana Guimaraes, zvakadaro zvakajeka kumashure kubva kune izvo zvavakatokwanisa kuratidza.
Asi iyo Rhone kirabhu, iri mukati merimwe mwaka wakasuruvara, shanduko yemurairidzi, inzvimbo yechinomwe muLigue 1, saka inowana European Top 8. Kekutanga kubvira 2010. Lyon, pane yekuEurope mamiriro, anoziva nzira yekuzvikunda. Iye anozvipa yake yekuremekedza quarter-fainari inotevera Mugovera muLisbon kutarisana neManchester City, seri kwemasuwo akapfigwa muLisbon. Pasi pemamiriro ezvinhu aya, kunyangwe kana mudzvanyiriri akakurumbira achangoburitsa Real Madrid akamira semadziro, zvakaoma kuti usatenda mukukwanisa kweimwe feat.
Juventus Turin - Lyon: 2-1
Hafu nguva: 1-1
Vatariri: kuseri kwemasuo akapfigwa
Referee: Mr. Zwayer (All)
Zvinangwa: Juventus: C. Ronaldo (43e, 60e. Lyon: Memphis (12e sp)
Yambiro: Juventus: Cuadrado (31e), Betancur (44e. Lyon: Aouar (19e), Dubois (38e), Memphis (42e), Matambo (76e), Chibvu (79e), Caqueret (87e), Marçal (89e).
Juventus Turin: Szczesny - Cuadrado (Danilo 71e), De Ligt, Bonucci (cap.), Alex Sandro - Pjanic (Ramsey 61e), Rabiot, Betancur - Bernardeschi (Dybala 71e, Olivieri 84e), Higuain, C. Ronaldo. Kupinda. : Sarri
Lyon: Malambo - Marcelo, Denayer (Andersen 61e), Marçal - Dubois (Musoro 90e), Caqueret, Guimaraes, Aouar (Thiago Mendes 90e), Cornet - Memphis (cap.) (Reine-Adélaïde 67e), Toko Ekambi (Dembelé 67e. Kupinda. : Garcia
Nyaya iyi yakatanga kutanga https://www.camfoot.com/les-lions-en-club/authentique-exploit-de-toko-ekambi-et-lyon-qui-eliminent-juventus-de-turin,30858.html
TELES RELAY 23425 Posts 1 mashoko
Vatican inofungei nezvekukunda kwaArchbishop Kleda pamusoro paCovid-19?
US Treasure yakadzika zvirango paHong Kong CEO